Rotary piritsi yekudhinda muchina vatengesi uye fekitori - China Rotary piritsi yekudhinda muchina vagadziri
Rotary Hwendefa / Piritsi Press Machine, Rotary Punch Press Machine
Model: ZP23F Hwendefa wekudhinda muchina Sample: UseThis michina is electromechanical yepamusorosoro chigadzirwa chakagadzirwa pahwaro hwemakore e otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro1 Iyo yakazara dhizaini ...
Otomatiki Piritsi Kugadzira Machine, Hwendefa Kugadzira Machine
Model: ZP23F Hwendefa wekudhinda muchina Sample: Shandisa Iyi michina is electromechanical yepamusorosoro chigadzirwa chakagadzirwa pahwaro hwemakore e otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1.Iyakajairika chimiro chemidziyo yacho compact ...
Otomatiki Rotary Type Candy Press Machine, Candy Kudzvanya Machine
Model: ZP23F Hwendefa wekudhinda muchina Sample Usage Iyi michina ndeye electromechanical yepamusorosoro chigadzirwa chakagadzirwa pahwaro hwemakore e otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1.Iyakajairika chimiro chemidziyo is compac ...
Zp-23f Rotary Hwendefa Yekutsikirira Mashini ine Hydraulic Pressure System
ZP23F Tablet muchina wekudhinda Sample Shandisa Iyi michina is electromechanical high-tech chigadzirwa chakagadzirwa pamusoro pemakore emakore otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1.Iyakajairika chimiro chemidziyo yacho compact uye reas ...
Yekutsikirira Hwendefa Press Machine
Effervescent Hwendefa Muchina Muchina Masampuli: UseThis michina inyanzvi yemagetsi-yepamusorosoro chigadzirwa chakagadzirwa pahwaro hwemakore ekuzviongorora chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro1 Iyo yakazara dhizaini ...
Otomatiki Rotary Munyu Hwendefa Dhinda Muchina
ZP29F Tablet muchina wekudhinda Sample Shandisa Iyi michina is electromechanical high-tech chigadzirwa chakagadzirwa pamusoro pemakore emakore otomatiki chigadzirwa chekuongorora chakagadzirwa nekambani yedu. Inogona kudzvinyirira akasiyana mabhegi akajairwa uye mamwe mahwendefa akasarudzika (anosanganisira maviri-akatsigira kudhinda): Midziyo iyi ndeyemishonga, kemikari, Sarudzo yakanakisa yechikafu, plastiki, zvemagetsi uye mamwe mabhizinesi ekugadzira. Zvimiro 1.Iyakajairika chimiro chemidziyo yacho compact uye reas ...
Zp23f Piritsi Yekutsikirira Mashini, Mini Hwendefa Kudzvanya Machine